Nso ke ọhụrụ ahịa na akaụntụ maka iwu afọ?
Legale wii wii
Site n'Ụzọ Iwu Kwadoro hemp, Farm Bill kere a iwu isi iyi nke CBD.
image n'aka: anatoliy Sizov | Getty Images
mfe search. quality achọta. Onye gị na dijitalụ portal maka afọ obodo.
10 January 2019 4 gụkwuo
echiche Green entrepreneur- mkpara onwe ha.
The Farm Bill, banyere December 2018, maakt de weg vrij voor CBD-producten om legaal te worden in het hele land – althans, Nke ahụ bụ olileanya nke ọkàiwu si wii wii ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na nke ahụ bụ otú ọnọdụ nekpughe, a ga-ewepụ ngwọju-anya ọbụla na anọgidewo na-CBD ngwaahịa kwụsịtụrụ ebe na-ekwu malitere n'Ụzọ Iwu Kwadoro wii wii, amalite na Colorado 2014. Nke ahụ bụ n'ihi gọọmenti etiti ka e depụtara wii wii dị ka ihe iwu na-akwadoghị Ịtọ oge m- ọgwụ na-achịkwa bekee Act, na mgbakwunye na cocaine na heroin.
Site n'Ụzọ Iwu Kwadoro hemp na Farm Bill, nwere US Congress na president meghere ụzọ maka CBD ngwaahịa, nke e nwetara site afọ. Ukwuu nke na ọ na-adabere n'ihe na-ekwu, na-ekpebi ime.
Ma nwere dị. Colleen Keahey, President nke Hemp Industry Association, gwara Consumer Reports na n'Ụzọ Iwu Kwadoro hemp na US nwere ike pụtara na ọ na-anọchi anya a ibawanye ma ọ bụ tripling nke ụlọ mmepụta n'ime otu afọ.
yiri: Seniors Bụ afọ ahịa ole na ole ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na
Gịnị CBD ngwaahịa?
Op dit punt zou de vraag kunnen zijn “wat zijn geen CBD-producten?” CBD, nke anọchi cannabidiol, a na-ama na-ndinọ na gummies, swiiti, chocolate, kọfị, mmiri, Pita nri, speciale menu-ihe na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, lotions, mmanụ, badkuipen – de lijst gaat maar door.
Gịnị mere ndị na-ewu ewu? Ebe ọ bụ na CBD a hụrụ na isi mgbu, myalgia, oge cramps, adịghị ala ala mgbu, dochie nchegbu na ọbụna ịda mbà n'obi. Na-eme egwuregwu na nakweere ya iji ma tupu mgbe ọzụzụ.
CBD bụkwa ihe mgwa Epidiolex, mma nke afọ a site na gọọmenti etiti Food na ọgwụ ọjọọ nchịkwa na-emeso ọdịdọ n'ihi na ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na abụọ n'ime ihe ndị kasị oké iche nke Akwụkwụ na-adọ. Ọ bụ nke mbụ ọgwụ mma site FDA na a emepụta nke afọ na a mgbaàmà akọwa na Drug Enforcement Agency, dịkarịa ala na okwu nke na-emepụta ọgwụ ojiji nke CBD, na FDA.
Belangrijk is dat CBD de chemische stof in marihuana is die niet het “hoge gevoel” veroorzaakt (na THC). Nke a bụ ihe dị mkpa dị iche mgbe ọ na-abịa n'ịtụle Farm Bill.
yiri: Federal Ou ukpan ukwuu na-adịghị ike na 2018
Hemp e mere iwu
Site na-agafe ugbo ụgwọ site Sineti nyere Republican ọtụtụ ndú Mitch McConnell maka ndokwa nke ụlọ hemp bụ iwu. Ọ na-enyere na n'ụlọ ya ala nke Kentucky na 2017 naanị 16 nde dollar hemp ere n'okpuru staatspilpprogramma nke e-akwado site na McConnell.
de president aka ọbụna ụgwọ na a pen mere nke hemp nke jisịrị na Kentucky nyere McConnell.
Asụsụ nke na-achịkwa bekee Act emeziri wepụ hemp
dị ka kwuru, na Rolling Stone, na-egosi na ụfọdụ anya banyere otú USDA ga-atụle steeti atụmatụ na ma a nwere ike ịbụ a nnukwu mgbochi. Ọ bụrụ na-ekwu adịghị n'okpuru plan, onye na-emepụta nwere ikike ozugbo n'okpuru a atụmatụ gọọmenti etiti.
Na a ịrịba ama nke pụtara mgbanwe, Colorado-dabeere Charlotte si Web aha ya bụ Eugenio agụ egwú dị ka onyeisi ibu mara maka ụlọ ọrụ. Charlotte si Web na-pụrụ iche na-amị CBD-nye Wellness ngwaahịa, tinyere ọṅụṅụ. Agụ egwú bụbu osote onyeisi oche nke zuru ụwa ọnụ ahịa n'ihi na mmiri, mma mmiri- na egwuregwu ọṅụṅụ na Coca-Cola.
Soro na dispensaries.com m nstagram banyere on elu ịnọ na ọhụrụ afọ ozi ọma.
Oku eyighị eyi ịzụ wii wii na-elu 765%